Sida loo wanaajiyo u fiirsashada: ku xooji maskaxdaada tabahaan | Ragga Stylish
Ma rabtaa inaad ogaato sida loo wanaajiyo u fiirsashada? Dejinta yoolal shaqsiyadeed iyo xirfadeed waa furaha farxadda, laakiin Si loo gaaro himilooyinkaaga, awoodda aad u leedahay inaad xoogga saarto waxay u baahan tahay inay kula joogtogaar ahaan xilliyada muhiimka ah sida wareysiga shaqada ama imtixaanka.
Diirad saarid la’aan ayaa kugu dhici karta waqtiga ugu badan ee aan munaasibka ahayn waxayna kugu sababi kartaa inaad seegto fursad qaas ah. Soo ogow caadooyinka fudud ee kaa caawin doona inaad yeelato feejignaan wanaagsan markaad u baahan tahay inta badan. Xusuusnow oo ku dhaqan si aan waxba u gaarin hadafkaaga:
1 Ma ka shaqeyn kartaa awooddaada inaad xoogga saarto?
1.1 Sida si joogto ah kor loogu qaado feejignaanta
2 Baro inaad wax ka qabato howlaha sugaya
3 Hurdo kugu filan
3.1 Tayada hurdada
4 Samee jimicsi joogto ah
5 Cun caafimaad leh
5.1 Sida loo helo tamar badan iyadoo la adeegsanayo cuntada
Ma ka shaqeyn kartaa awooddaada inaad xoogga saarto?
Haa. Awoodda in xoog la saaro waxaa lagu shaqeyn karaa layliyo ay muddadooda iyo dhibaatadoodu si tartiib tartiib ah u kordheyso. Ujeeddada ayaa ah in si buuxda diiradda loo saaro qoraal gaar ah ama waxqabad waqti cayiman (dadka fiirsigooda liita waxay badanaa ku bilaabaan shan daqiiqo oo nasasho ah iyo laba daqiiqo). Laga bilaabo wakhtigaas, maalin kasta waa inaad kordhisaa waqtiga shaqada iyo nasashada labadaba illaa aad ka gaarto awoodda isku-uruurinta ee lagama maarmaanka u ah barashada qoraalka dhowr saacadood markiiba iyadoo maskaxda aysan ka goynin sababo la xiriira mashquulinta nooc kasta ha noqotee.
Sidoo kale waa inaad si cad uga muuqataa yoolalkaaga iyo faa'iidooyinka aad ka heli doonto iyaga, iyo sidoo kale awood weyn. Ka shaqeynta tan dambe waxay kaa caawineysaa inaad iska indhatirto dhammaan waxyaabaha ku mashquulinaya ilaa shaqada laga qabanayo ay ka dhammaato. Awoodda iyo fiirsashada ayaa si dhow isugu xidhan.
Sida si joogto ah kor loogu qaado feejignaanta
Ha seegin fursad kasta oo aad ku xoojin karto maskaxdaada waqtiga firaaqada ah. Akhrisku waa fikrad aad u fiican, laakiin sidoo kale xafididda qoraalada oo maskaxdaada ku xujeeysiiya noocyada kala duwan ee ciyaaraha maskaxda.
Baro inaad wax ka qabato howlaha sugaya
Qof kastaa wuxuu leeyahay liis uu ku sameeyo, laakiin taasi yaanay kaa hor istaagin inaad xoogga saarto waxa aad qabanayso.. Markii la waydiiyo sida loo wanaajiyo feejignaanta, khuburo badan ayaa kugula talinaya sameynta liis qoran oo ku saabsan shaqooyinkan, gaar ahaan ka hor inta aadan bilaabin hawl u baahan fiiro gaar ah Waxay u muuqataa in khiyaanadan yar ay ka dhigeyso kuwaan-to-dos ka yar inay maskaxdaada ku soo galaan qaab feker ah markaad u baahato inaad wax kale diirada saarto.
Waqtigan xaadirka ah qof walba wuu ogyahay taas hurdo la’aan iyo feejignaan haba yaraatee wax isma waafaqsana. Iyo, dabcan, awoodaada inaad feejignaato kuma shaqeyn karto karti buuxda hadii aadan siinin maskaxdaada saacadaha nasashada ee ay ubaahantahay inay kasoo kabato dadaalkii la sameeyay maalintii oo dhan.
Maxay ka dhigan tahay helitaanka hurdo kugu filan? Haddii aad seexato wax ka yar 7 saacadood, ma heli doontid hurdo kugu filan. Hurdada u dhexeysa 7 ilaa 8 saacadood maalintii ayaa loo arkaa inay tahay aasaasi aasaasi u ah in la yeesho awood wax looga qabanayo dammaanadaha. Marka waa inaad hubisaa inaad ku raaxeysatid tayo wanaagsan oo hurdo ah.
Fiiri maqaalka: Waxyaabaha saameeya tayada hurdada. Halkaas waxaad ka heli doontaa tayada hurdo maxay tahay iyo maxay yihiin cadawga ugu weyn markay timaado helitaanka nasasho caafimaad leh.
Samee jimicsi joogto ah
Layli jimicsi waa inay noqotaa mid ka mid ah tiirarka nolosheena, nasiib wanaagse waxaan ku sii baraarugaynaa. Waddooyinka waxaa ka buuxsama orodyahannada waxa ugu horreeya subaxnimada iyo jimicsiyada ayaa jabinaya diiwaan gelinta diiwaangelinta. Haddii aad ka mid tahay, nooc kasta oo isboorti ah oo aad ku tababarto, waxaad horeyba u ogaan laheyd in jirkaaga uu dhib ku hayo markii aad joojiso tababarka xilli. Mid ka mid ah dhinacyada ay tahay meesha ugu muuqata waa feejignaanta, tan iyo jimicsigu wuxuu hagaajiyaa wareegga dhiigga ee jirkaaga oo dhan, oo ay ku jiraan maskaxdaadu.
Sidoo kale, jimicsigu wuxuu baraa maskaxda inay iska indhatirto waxyaabaha jeedinaya. Sida barashada ama gudbinta shaqo, waxay u baahan tahay anshax iyo awood si looga gudbo jimicsi adag.
Maskaxdu waxay ubaahantahay shidaal ay ku shaqeyso iyo si aad u siiso, waa inaad hubisaa in, marka lagu daro, cuntooyinka ku jira cuntadaadu ay ku siinayaan nafaqooyin kala duwan oo kala duwan. Tani waa waxa loo yaqaan cunto caafimaad leh oo dheellitiran.
Sidee loo hagaajiyaa ku-fiirsashada cuntada? Waa macquul? Haa. U fiirsashadaada ayaa wax badan ka faa'iidi doonta cuntada hodanka ku ah nafaqooyinka, gaar ahaan cuntooyinkaas oo macnaheedu yahay cirbadeyn wanaagsan oo tamar ah. Sidoo kale waa muhiim in cuntooyinku yihiin kuwo fudud, maadaama aan ognahay in cuntada culus ay ka dhigayaan jirkaaga oo dhan, oo ay ku jiraan maskaxdaada, inay u shaqeeyaan si gaabis ah, sidaa darteed waxay u horseedi karaan dhibaatooyin si ay u gaaraan xaalad ugu fiican oo ah feejignaan.
Sida loo helo tamar badan iyadoo la adeegsanayo cuntada
Fiiri maqaalka: Cunto firfircoon. Halkaas waxaad ka heli doontaa waxa la cuno si loo kordhiyo tamarta tamarta ee cuntadaada, oo ah fure muhiim ah oo looga adkaado iyadoo la damaanad qaadayo dhammaan caqabadaha maalmahaaga aadka u baahan.
Nasasho qaado, gaar ahaan marka aad dareento xayiraad. Ma aha inay ahaato hakad aad u dheer. Mararka qaarkood shan daqiiqo ayaa kugu filan inaad maskaxdaada qaboojiso oo sidaa awgeed aad ugu raaxeysato awood aad u weyn oo ah feejignaan markaad shaqadaada dib u bilowdo. Waad qaadan kartaa waxoogaa socod ah (ugufiican banaanka) ama xoogaa fidin ah adigoon miiskaaga ka bixin.
Kala-goysyada ayaa sidoo kale waxtar u leh ka hortagga buufiska. Cilladaan ayaa kaa hor istaagi karta inaad si sax ah u fiirsato, sidaas darteed, marka lagu daro qaadashada nasashooyinka markii aad dareento inaad u baahan tahay, waa inaad ku dhaqantaa caadooyin kale, adigoo ka bilaabaya inaad nolosha si deggan u qaadato. Yoga, fikirka, iyo safarada buuraha ayaa ah kuwa xoojiya xoojinta kale ee mudan in laga fiirsado..
Laakiin maxaa dhacaya markaad u baahan tahay inaad diirada saarto daqiiqado gaar ah oo aadan awoodin? Sababta ugu badan ee dhibaatadan badanaa waa walaac. Si aad uga tagto walbahaarka oo aad diiradda u saarto waxa aad sameyneyso oo keliya, waa inaad sameysaa wax kasta oo aad ku nasato. Y farsamooyinka neefsashadu waa fikrad wanaagsan marka loo eego macnaha guud.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Sida loo wanaajiyo feejignaanta
Apposta: Dukaanka shaatiga la adeegsan karo